လေလံ - အင်ဒရူး Grima လက်ဝတ်ရတနာများ၏အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းမှုကို Bonhams တွင်လေလံတင် | HIGH ရတနာအိပ်မက်
သြဂုတ်လ 9, 2017
Andrew Grima မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော citrine နှင့်စိန်ပုံသဏ္bာန်သည်ရောင်းချမှုမတိုင်မီပေါင် ၁၂၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ကြားဖြစ်သည်
terminal တွင်ရှိကြီးမားသောနှင်းဆီပန်းလိမ္မော်ရောင် citrine ပါ ၀ င်သောစည်ကြိုးဝါယာကြိုး၏ cornucopia အဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးတောက်ပသောဖြတ်စိန်အသေးစိတ်ဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။
အင်ဒရူး Grima လက်မှတ်ထိုးသည့်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရတနာစုဆောင်းမှုကိုလန်ဒန်၊ လန်ဒန်မြို့ရှိတူတူဒန် Bonhams အောက်တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
စုဆောင်းခြင်းကို Bonhams 'Fine Jewellery' ရောင်းချသည့်အချိန်တွင်တင်ပြလိမ့်မည် Andrew Grima မှလက်ဝတ်ရတနာ ၅၅ ခုပါ ၀ င်မည် သူတို့တွင်သူ၏အစောဆုံးကျောက်မျက်ရတနာအချို့သည်လန်ဒန်တွင်ခြောက်ဆယ်ခြောက်ကာလအတွင်းတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များမှ ၉ ဝပြည့်နှစ်များအထိသူမသေဆုံးမီ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
အင်ဒရူး Grima, ပုံတူ
Charismatic Anglo-Italian ရတနာ Andrew Grima သည် ၂၀ ရာစု၏ရဲရင့်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Swinging ခြောက်ဆယ်နှင့် ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတစ်လျှောက်လုံးတော်ဝင်မင်းသား၊ ကျော်ကြားသူများ၊HM အဆိုပါအပါအဝင်အစောဆုံးဖောက်သည်ဖြစ်ပါတယ် ဘုရင်မ၊ မင်းသမီးမာဂရက်၊ ဂျက်ကီကနေဒီအိုနာနှင့် Ursula Andress ။ ယနေ့ သူ၏လက်ရာများတွင်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများဖြစ်သော Marc Jacobs နှင့် Miuccia Prada တို့ပါဝင်သည်။
ဒီမှာ အင်ဒရူးဂရီမာနှင့်သူ၏အလုပ်အပေါ်သမိုင်းကြောင်းနောက်ကြောင်းပြန်မှုကို Bonhams မှထုတ်လွှင့်သောအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဗီဒီယိုဖြစ်သည်။
Grima ရဲ့အခြေခံ ဒီဇိုင်းများအရာမှလှုံ့ဆော်မှုဆွဲငင် အနုပညာ၊ ပန်းပုနှင့်သဘာဝကမ္ဘာ၊ တစ် ဦး ဝင်ပြီးရတနာဖြစ်လာခဲ့သည်သောအရာကိုအကြီးအမူရင်းနှင့်တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းကိုထိုးသွင်း စစ်ပြီးခေတ်ဗြိတိန်တွင်မြင်တွေ့ရသောမြင်ကွင်း.
Andrew Grima မှရွှေ၊ Baroque ယဉ်ကျေးမှုပုလဲ၊ ရောင်စုံနီလာနှင့်စိန်လည်ဆွဲဒီဇိုင်းဆွဲသည်
သူကရဲရင့်ပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောအရာကိုဖန်တီးခဲ့တယ် အဘယ်သူ၏တန်ဖိုးကိုသူတို့ရဲ့ဗေဒဖွဲ့စည်းမှု၌အိပ်ရတနာ တန်ဖိုးကြီးစိန်နှင့်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်များ၏ကာရက်အလေးချိန်ရုံထက်။ သူ is ၂၀ ရာစု၏ခေတ်မီသည့်ရတနာဒီဇိုင်နာများအနက်မှတစ် ဦး အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည် မိမိအပိုငျးပိုငျးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဆည်းကပ်နေကြသည်.
Kunzite နှင့် Diamond လက်စွပ်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း
Bonhams Jewellery မှဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အမ်မလီဘာဘာ၏စကားများမှာ -
အင်ဒရူး Grima ၏အလုပ်သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးနှင့်မူရင်းနှင့်ကွဲပြားသည်။ သူဟာအခြေခံအားဖြင့်ရတနာရတနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ သူ၏ဒီဇိုင်းများသည်သူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်ခေတ်တစ်ခုစီ၏စိတ်ဓာတ်ကိုထင်ဟပ်စေပြီးယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်ဝတ်ဆင်။ ခေတ်မီနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီရောင်းချမှုမှာတစ်ခုချင်းစီကသူ့အလုပ်၏မတူကွဲပြားမှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဖော်ပြသည်။
အင်ဒရူးဂရီမာ၏ဒီဇိုင်းကိုစုဆောင်းသူများက၎င်းတို့ကိုသေးငယ်သောအနုပညာလက်ရာများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ရဲရင့်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ထူးခြားမှုတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရပါတယ်။ လေလံတင်ရောင်းချမည့် Grima မှရရှိသောအဖိုးတန်ဆုံးနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂလိကရတနာစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဤစုဆောင်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်စိတ် ၀ င်စားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ”
ထပ်ထည့်ခြင်းအားဖြင့် Andrew Grima ၏သမီး Francesca သည်ရောင်းချမှုမတိုင်မီ Bonhams သို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
“ တကယ့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းလှတဲ့ငါ့အဖေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတစ်နေရာတည်းမှာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ သူ၏လှပပြီးအော်ဂဲနစ်ဒီဇိုင်းများဖြင့်သူသည်ကြမ်းတမ်းသောကျောက်များကို၎င်းတို့၏သဘာဝအခြေအနေတွင်ယူဆောင်နိုင်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနှင့်သာမန်ထက်ထူးကဲသောအရာများကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် textured gold နှင့် Tourmalines, opals, citrine, green beryl နှင့် topaz ကဲ့သို့သောသမားရိုးကျမဟုတ်သောကျောက်များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သူ့ကိုမမြင်ဖူးသောရတနာအမျိုးအစားကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ လူတွေသတိပြုမိပြီးလေးစားမိပြီးယနေ့ထိတိုင်လုပ်နေတဲ့ရတနာအမျိုးအစား။ ”
အထူးများ မိမိအလေးစားထံမှအပိုင်းပိုင်းပါဝင်သည် Omega အတွက်“ Time About” လက်ပတ်နာရီ, မှတစ်ခုဖြစ်သော အများဆုံးဆန်းသစ် အစဉ်အဆက်လုပ်နာရီ၏ collection များကိုအဖြစ်ထံမှအကျင့်ကိုကျင့် “ Rock Revival” စုဆောင်းမှု ကြောင်း၌ကြီးမားသော, ရိုင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောကျောက်မျက်ကြည်လင်ထည့်သွင်း။
Omega သည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် Grima သို့ချဉ်း ကပ်၍ နာရီနှင့်နာရီများစွာကိုဖန်တီးရန်အတွက်မူလစာရင်း ၅၅ ခုနှင့်ကိုက်ညီသောရတနာ ၃၁ ခုဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Grima မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Omega အတွက်“ About Time” စုဆောင်းမှုတွင်အသုံးချခဲ့သည်။ ကျောက်မျက်ရတနာမှတစ်ဆင့်အချိန်ကုန်ခံမည့်လက်ပတ်နာရီ“ ဖန်” အဖြစ်ကျောက်မျက်ရတနာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စုဆောင်းမှုကို ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်လန်ဒန်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်း (နာရီတိုင်းမှာအနည်းဆုံးခြောက်ပတ်မှလေးလအထိကြာမြင့်သည်။ )
ရွှေ၊ citrine နှင့်စိန်လက်ပတ်နာရီ / bangle, 'Cerini'၊ နံပါတ် ၈၀“ About Time” စုဆောင်းမှုမှ Andrew Grima မှ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ ကြိုတင်ရောင်းချမှုသည်ပေါင် ၁၅၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ကြားခန့်မှန်း
ကြီးမားသော, ဘဲဥပုံဖြတ် citrine 'ဖန်', ကျယ်ပြန့် 'matchstick' ဘန်းသီးပေါ်တွင် baguette- ဖြတ်စိန်များနှင့်အတူအလှဆင်ရွှေ 'matchsticks' '၏ရေးစပ် bezel အတွင်း, bezel အတွင်း။ ဒီဒီဇိုင်းကိုအီတလီတစ်ဝှမ်းရှိအရက်ဆိုင်များတွင်သုံးသောဖယောင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမီးဖိုများဖြစ်သော cerini ကမှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
Andrew Grima မှ“ About Time” စုဆောင်းမှုမှနံပါတ် ၁၅ ဖြစ်သောရွှေရောင်ပန်းရောင် Tourmaline နာရီလက်ပတ် 'Greenland' သည်ကြိုတင်ရောင်းချမှုခန့်မှန်းခြေပေါင် ၂၀,၀၀၀ မှ ၃၀,၀၀၀
မမှန်ပုံသဏ္shapedာန်ရှိသောပန်းရောင် Tourmaline 'glass' သည်မမှန်ပုံသွင်းထားသော 'gritted' ရွှေလက်ကောက်အတွင်း၌ဖြစ်သည်။
Andrew Grima မှ ၁၉၇၂ မှရွှေနှင့်အစိမ်းရောင်ကျောက်မျက် 'နင်းကျောက်များ' နာရီလက်ပတ်နာရီကိုခန့်မှန်း။ ပေါင် ၁၈၀၀၀ မှ ၂၅၀၀၀ ကြား
ဘက်ပေါင်းစုံပါ ၀ င်သောအစိမ်းရောင်ဖျော့ဖျော့ကျောက်မျက်ရဖန်များ - မမှန် - ပုံသဏ္'ာန်တူသောသုတ်ထားသောသုတ်ကြိုးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤပုံစံသည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော 'Caribbean' နာရီနှင့်ဆင်တူပြီး ၁၉၇၀ တွင် About Time ၏ညွှန်းကိန်းတွင်နံပါတ် ၁ ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်အင်ဒရူးဂရီမာမှရွှေနှင့် amethyst ဆွဲကြိုးနားကပ်များကိုကြိုတင်ရောင်းချရန်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုမှာပေါင် ၆၀၀၀ မှ ၈၀၀၀ ကြားဖြစ်သည်။
ရော့ခ်ပြန်လည်ရှင်သန်မှုစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည်ရွှေရောင်တြိဂံများနှင့်အရောင်တောက်တောက်ဖြင့်ဖြတ်ထားသောစိန်တစ်ခု၏ရှုပ်ထွေးသောအမွှေးကြိုင်ကျောက်သလင်းနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောတူညီသောဒီဇိုင်း၏ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဆွဲကြိုးကိုဆိုင်းငံ့ကာအဝါရောင်ရွှေ ၁၈ ကာရက်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ။
Andrew Grima မှ ၁၉၇၃ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောရွှေ၊ dioptase နှင့်စိန်ဆွဲကြိုးများ၊ ကြိုတင်ရောင်းချမှုပမာဏသည်ပေါင် ၁၂၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ကြားဖြစ်သည်
“ Sticks and Stones” စုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ဆွဲကြိုးသည်အစိမ်းရောင် dioptase ကြည်လင်စွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် 'ပြန့်ကျဲနေသော' နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိရွှေနှင့်မွမ်းမံထားသောအထပ်များနှင့်အရောင်အချောဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအပြီးသတ်စိန်ပွင့်ရှစ်စင်းဖြင့်ရွှေစွန်း ၁၈ ခု၌တပ်ဆင်ထားသည်။ ။
၁၈၅ ကာရက်ရှိရွှေ၊ amethyst, မြနှင့်စိန်လက်စွပ်ကို Andrew Grima မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ကြိုတင်ရောင်းရငွေခန့်မှန်းခြေပေါင် ၄၀၀၀ မှ ၆၀၀၀
ကတ္တရာပုံစံပုံသဏ္ဌာန် amethyst သည်အမြင့်အမျိုးမျိုး၏ 'ရိုးတံများ' ဖြင့်ဝိုင်းရံထားခြင်းဖြစ်ပြီးအဆင့်မြင့်စိန်နှင့်စတုရန်းပေစိန်များကိုတပ်ဆင်ထားပြီး၊ အဝါရောင်ရွှေဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ထပ်မံတောက်ပသောစိန်အသေးစိတ်ကိုပခုံးများပေါ်တွင်ထည့်ထားသည်။
၁၈၇ ကာရက်ရှိရွှေ၊ citrine နှင့်စိန်လက်စွပ်ကို Andrew Grima မှ ၁၉၇၁ တွင်ကြိုတင်ရောင်းချမှုသည်ပေါင် ၄၀၀၀ မှ ၆၀၀၀ ကြားဖြစ်သည်
ရွှေရောင်အဝါရောင်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသောစိန်တစ်ပွင့်ဖြင့်စိမ်းလန်းနေသော 'textured wire' ၏တောင်ထိပ်တွင်အဆင့်မြင့်သော citrine သည်။
၁၉၆၆ ခုနှစ်ခန့်တွင် Andrew Grima မှရွှေနှင့်စိန်လည်ဆွဲ၊ ကြိုတင်ရောင်းချမှုခန့်မှန်းချက်သည်ပေါင် ၄၀၀၀ မှ ၆၀၀၀ ကြားဖြစ်သည်
ဒီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်လည်ဆွဲအကြောင်း: အင်ဒရူး Grima ရဲ့အင်ဂျင်နီယာနောက်ခံနဲ့စိတ်ကူးကသူ့ကိုရွှေချည်မျှင်ကြိုးသုံးပြီးဒီထူးခြားတဲ့ရတနာကိုတီထွင်ဖို့ ဦး ဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒီနည်းပညာကိုယနေ့ Grima ရဲ့လက်မှတ်ဒီဇိုင်းလို့လူသိများတယ်။ ဒီနည်းပညာကသူ့ကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသိမြင်စေတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းတွင်တင်းကျပ်မှုရှိပုံရသောအခါထောင်နှင့်ချီသောဝါယာကြိုးများနှင့်ပုန်းကွယ်နေသောပတ္တာများသည်လည်ဆွဲအား ၀ တ်ဆင်သူအားလက်ခံရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဤရလဒ်ရရှိရန်လက်တဆုပ်စာသာကျွမ်းကျင်သည့်ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုများလိုအပ်သည်။ ဝါယာကြိုးတစ်ခုစီကိုနောက်တစ်ခုသို့သွယ်တန်းရန်လိုပြီးအကြွေများစွာကိုပန်ကာနောက်ကျောတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
၁၉၆၈ အင်ဒရူးဂရီမာရေးဆွဲသောရွှေနှင့်စိန် 'ခဲတံရိတ်' လက်ကမ်းစာစောင်၊ ကြိုတင်ရောင်းချမှုခန့်မှန်းခြေပေါင် ၄၀၀၀ မှ ၆၀၀၀
တကယ့်ခဲတံရိတ်ရိတ်များ၏ဤလက်ကမ်းစာစောင်ကို rosette အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရွှေဝါရောင်သို့သွန်းလောင်းပြီးတောက်ပသောစိန်များဖြင့်ကွဲပြားသည်။
Andrew Grima, ၁၉၇၂ မှပြုလုပ်ခဲ့သောရွှေ၊ ကျောက်တုံးနှင့်စိန်ဆွဲကြိုး၊ လည်ဆွဲ၊ ကြိုတင်ရောင်းချမှုခန့်မှန်းချက်£ 1972-20,000
အရောင်တောက်နေသော torque မှဆိုင်းငံ့ထားတောက်ပသောဖြတ်စိန်ပွင့်များ၏နှင်းပြန့်ကျဲ။ Opals သည် Andrew Grima ၏အကြိုက်ဆုံးကျောက်တုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Andrew Grima မှ ၁၉၇၄ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော Gold, Citrine နှင့် Diamond Necklace သည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ£ 1974-15,000
တြိဂံဖြတ် citrines နှင့်အလားတူ - ဖြတ်စိန်ငယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောမြင့်မားစွာတင်ထားသောဘားသည် ၁၈ ကာရက်အဝါရောင်ရွှေဖြင့်ဖုံးထားသောတြိဂံပုံညှပ်နှင့်အတူရွှေဝါရောင်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
Andrew Grima မှ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောရွှေ၊ ပန်းရောင် Tourmaline၊ မြနှင့်စိန်ဆွဲကြိုးများ၊ ပေါင် ၁၂၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ကြားကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု
ပီစီပုံသဏ္'ာန် 'ဖွဲ့စည်းထားသောဝါယာကြိုး' အစုနှစ်ခုပါဝင်ပြီးတစ်ခုစီသည်သစ်တော်သီးပုံ၏မြုပ်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိကြီးမားသောသစ်တော်သီးပန်းရောင် Tourmaline ဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီးတောက်ပသောစိန်များဖြင့်ပြန့်ကျဲလျက်ရှိသည်။ ရွှေ, ချည်၏ကျယ်ပြန့်ဖဲကြိုးနှင့်တူရန် Matt နှင့်ထွင်း finish ကို၏နောက်ပိုင်း torque လည်ဆွဲကနေဆိုင်းငံ့။
ဤနောက်ဆုံးလည်ဆွဲသည်စုဆောင်းထားသည့်လက်ရှိပိုင်ရှင်၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူသည်အမည်မဖော်လိုသူဖြစ်သည်။ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်သည့်အခါတိုင်းအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်သည့်အခါတိုင်း၎င်းသည်မည်သည့်အရာမျှမဝတ်သောအဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်ထားသည်။ တကယ်တော့ငါကပတ်ပတ်လည်မတ်မတ်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်မည်သည့်ပြိုင်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်ပါစေ Grima အပိုင်းသည်ဝတ်ဆင်ရသည့်အခါတိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုလေးစားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ”
သူ၏ထူးခြားသောဖန်တီးမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ယနေ့ခေတ်အင်ဒရူး Grima သည် ၂၀ ရာစု၏ခေတ်မီရတနာဒီဇိုင်နာများအနက်မှတစ် ဦး အဖြစ်မည်ကဲ့သို့အသိအမှတ်ပြုခံရသည်ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ စစ်ပြီးခေတ်ကာလ၏သြဇာအရှိဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သူ၏လက်ရာများကို Victoria & Albert ပြတိုက်နှင့်ရွှေပန်းထိမ်များကိုးကွယ်သောကုမ္ပဏီများမှတွေ့ရှိနိုင်သည်။ CC
Bonhams စာနယ်ဇင်းရုံး၏ပစ္စည်းအားလုံးပါ ၀ င်သည်။
Tags:လလေံပှဲ • Bonhams • ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှု
မှတ်ချက်2ခုလေလံ - အင်ဒရူး Grima လက် ၀ တ်ရတနာ၏အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းမှုကို Bonhams တွင်လေလံတင်သည်"
Pingback: လေလံ - စက်တင်ဘာလတွင် Bonhams London Fine Jewellery Sale ခေါင်းစဉ်သို့ရောင်စုံကျောက်မျက်ရတနာများ
Pingback: Bonhams London ရှိရှားပါးဖန်စီရောင်စုံစိန်များ | HIGH ရတနာအိပ်မက်